भोजभतेरमा खाना खाँदा किन सोचविचार गर्ने ?
नेपाल र भारत चाड पर्व र बिहेबटुलोमा रमाउने देश भएकाले वर्षैभरीजस्तो भोजभतेर चलिरहन्छ।
यस्ता भोजभतेरमा रमाउँदा हामी आफ्नो स्वास्थ्यको कुनै ख्याल गर्दैनौं र जथाभावी जे पनि र जति पनि खाइदिन्छौं । अनि रमाइलो गरेको अर्कोदिन पेट खराब वा बिरामी भएर ऐया र आत्था गर्दै उपचार गर्न डाक्टरकहाँ दगुर्छौं।
यसरी भोजभतेरमा जथाभावी खाएर बिरामी हुनबाट जोगिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित सर गंगाराम अस्पतालकी डाइट विशेषज्ञ डाक्टर मुक्ता वशिष्ठ यस्ता सुझाव दिन्छिन्।
सबैभन्दा पहिले के गर्ने ?
खाली पेट चिनी नहाली कागती पानीमा थोरै मह र एक चुट्की बेसार मिसाएर पिउने । सकेसम्म दैनिक बिहान यसरी पानी खाने बानी बसाल्ने । यसले हाम्रो पाचन प्रणाली सधैं ठीक राख्नुका साथै पेटका अन्य रोगबाट पनि जोगाउँछ ।
बदाम (कागजी बदाम, पेस्तालगायत), ओखर, काजु, किसमिस, छगडा मिसाएर खाने । बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स) वा आफ्नो शरीरको वजन अनुसार यी सुख्खा फलफूलको मात्रा धेरै वा थोरै खान सकिन्छ– धेरै वजन भए, सुख्खा फलफूलको मात्रा थोरै । यी सुख्खा फलफूलले पर्याप्त ऊर्जा दिनुका साथै कार्बोहाइड्रेट पचाउन पनि सघाउँछन् ।
सकेसम्म धेरै फलफूल खाने । तर भोजन गर्नुभन्दा आधा वा एक घन्टाअघि फलफूल खानुपर्छ । भोजन गर्नासाथ फलफूल खाँदा कुनै फाइदा हुँदैन । त्यसैगरी कतिपय व्यक्ति फलफूल काटेर राख्छन्, यसो गर्नु पनि ठीक होइन । फल काट्नासाथ खानुपर्छ । फलबाट हामीले एन्टिअक्सिडेन्ट, भिटामिन, खनिज पाइन्छ, जसले हामीलाई बिरामी हुनबाट जोगाउँछन् ।
दैनिक ग्रिनटी पिउने । दिनभरमा २ पल्ट ग्रिनटीमा आधी चम्चा दालचिनी मिसाएर पिएमा यसले मधुमेह पनि नियन्त्रण गर्छ।
दहीमोही वा लस्सि पनि भोजनमा सामेल गर्न सकिन्छ । फलको जुस पिउने भए डिब्बामा आउने जुसको साटो घरमै ताजा जुस बनाएर पिउने ।
पेट भारी भए वा अपच भएसम्म तारेका खानेकुरा खाँदै नखाने।
नियमित यसरी भोजन गरे धेरै मात्रामा हामी स्वस्थ रहन सक्छौं ।
कामकाजी व्यक्तिहरूका लागि सुझाव :
– दैनिक बिहान पानी, ग्रिनटी वा हर्बलटी पिउने
– कागजी बदाम, ओखर, पेस्ता, काजु, छगडा कार्यालय लैजाने । साथमा नकाटेको एउटा फल पनि ।
– खाजा वा ब्रेकफास्ट खाएर मात्र हिँड्ने । एक कप दूध, २ टुक्रा पाउरोटी र प्रोटिनयुक्त कुनै खानेकुरा जस्तै अन्डा खाने । शाकाहारी भए पनिरका परिकार वा दही खान सकिन्छ। बिहान ९ बजेभन्दाअघि खाजा खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
– दिनभर एक कपभन्दा बढी चिया नपिउने र गुलियो पनि धेरै नखाने ।
– तारेको वा तेलमा भुटेका खानेकुरा सकेसम्म थोरै खाने ।
– व्यायाम, योग गर्ने वा पैदल हिँड्ने । दैनिक कम्तिमा १० हजार पाइला हिँड्ने ।